UNks Boitumelo Mabuza noMnu Denvour Raboroko ehhovisi elisePort Shepstone leKolishi LezeSayensi Yezempilo.
Ngemva kokuqeqeshwa iminyaka eyisithupha e-Cuba, abafundi ababili abafundela ubudokotela uMnu Denvour Pabalelo Raboroko noNksz Boitumelo Mabuza bafunda eKolishi LeSayensi YezeMpilo.
Bangabanye babafundi abangama-60 abakwi-Nelson Mandela-Fidel Castro Medical Collaboration Programme (i-NMFCMCP) abathathwe e-UKZN lapho bezoqeqeshelwa ukwelapha khona izinyanga ezili-18 ukuze bakwazi ukubhaliswa kwi-Health Professions Council of South Africa.
Kulezizinyanga ezingama-18, lababafundi bazoshintsha imikhakha abazoyifundela okukhona kuyona ukwelapha imindeni, ukwelapha abakhulelwe nabantu besifazane, ukwelapha ngaphakathi, ingqondo, ukuhlinza nokwelapha izingane. Lemikhakha ifundiswa ezibhedlela ezihlukene KwaZulu-Natal.
URaboroko noMabuza base-Port Shepstone Hospital, lapho beshintshana khona eMkhakheni Wezokwelapha Ngaphakathi.
Ekhuluma ngemuva lakhe uRaboroko, odabuka eLimpopo, uthi wakhula kanzima ekhula ekhaya lapho ayehlukunyezwa khona eneminyaka eyisikhombisa okwenza waba nesifo sokuwa.
URaboroko uthi wayephasa kahle esikoleni, kwathi eBangeni le-10 wakhethwa ohlelweni i-University of Witwatersrand Targeting Talent yabafundi abahlakaniphile. URaboroko ubexhaswe wuMnyango WezeMfundo waseLimpopo, i-SANRAL neBP.
URaboroko ozithandela ezociko ekuqaleni wayengacabangi ukufundela ubudokotela kodwa kwathi eBangeni le-12, wafaka isicelo somfundaze ukuyofundela eZesayensi Yezemvelo e-Turkey kodwa ngenxa yesimo sakubo wangakwazi. Ngonyaka wama-2014 uRaboroko wafaka isicelo somfundaze i-NMFCMCP, kwathi ekupheleni kwaloyonyaka waya e-Cuba.
URaboroko, njengabo bonke abafundi baseNingizimu Afrika, abenza lezizifundo, wanikwa izinyanga ezine ukuthi afunde i-Spanish, ulimi lwase-Cuba. Uthi akaphathekanga kahle e-Cuba, wagula, waba nokhwantalala okwenza ukuthi agule ngonyaka wesine. Wabuyiselwa eNingizimu Afrika izinyanga eziyisishiyagalolunye ukuthi azokwelashwa ngokomzimba nangokwengqondo.
‘Siphathiswe okwamakhosi e-UKZN. Indawo yokuhlala intofontofo, sinezinsizakusebenza ezinhle nabantu abafundisayo bafundisa kamnandi. Kuningi okufanele sikufunde ngemva kokubona okuncane emsebenzini wokwelapha e-Cuba.
‘Ngabe angikho lapha ngikhona ukuba angisizwanga ngabantu engingabazi. Ngiyabonga kubona,’ kusho uRaboroko.
URaboroko uhlela ukuqala i-podcast ebizwa nge-Medicine Made Easy, ezofundisa umphakathi ngezindlela zokwelapha izifo ezijwalekile, ukuzigwema, amakhambi avamile asekhaya, nempilo.
UMabuza, odabuka eLimpopo naye, uthi wakhuthazwa ngugogo wakhe oyimpumputhe ukuthi enze iziqu zobudokotela. ‘Ugogo akakaze angibone, ngakho ngenxa yaleso simo ngakhuthazeka ukuthi ngenze umsebenzi ozongenza ngikwazi ukwenza ushintsho empilweni yabantu.’
Ngemva kokuqeda umatikuletsheni, uMabuza wabhalisela Ezobunjiniyela Bamakhemikhali e-University of Johannesburg kodwa wayeka ngemva kweminyaka emibili ngenxa yezinkinga zokushoda ngemali.
Wafaka isicelo somfundaze eMnyangweni Wezempilo, saphumelela ukuthi abe yingxenye ye-NMFCMCP. ‘Ngiyakuthnda ukuba se-UKZN. Kuseqophelweni eliphezulu. Sithola ukwesekwa okuningi, kanti izinto zingihambela kahle.’
UMabuza uhlela ukwenza i-Master’s in Business Administration bese evula ibhizinisi lakhe.